ESI WEGHACHITE OZI EHICHAPỤ NA SKYPE - SKYPE - 2019
Weghachite ehichapụ ozi na Skype
Mgbe ị na-arụ ọrụ na Skype, e nwere oge mgbe onye ọrụ na-ezughị ụzọ wepụ ozi dị mkpa, ma ọ bụ akwụkwọ ozi zuru oke. Mgbe ufodu nhichapu nwere ike ime n'ihi uzo usoro ihe di iche iche. Ka anyị mụta otu esi eweghachite akwụkwọ ozi ezipụ, ma ọ bụ ozi ọ bụla.
O di nwute, enweghi ngwaọrụ ndi ozo na Skype nke na-enye gi ohere ikiri ozi ndi ehichapụrụ ma obu kagbuo nhichapu. Ya mere, iji weghachi ozi, anyị ga-eji ihe nkesa ndị ọzọ.
Nke mbụ, anyị ga-aga na nchekwa ebe nchekwa data Skype. Iji mee nke a, site na ịpị njikọ nchịkọta na Win + R keyboard, anyị na-akpọ windo "Run". Tinye iwu "% APPDATA% skype" n'ime ya, ma pịa bọtịnụ "OK" ahụ.
Mgbe nke ahụ gasịrị, anyị na-aga na folda ahụ ebe isi ojii data Skype dị. Ọzọ, gaa na nchekwa ahụ nke na-aza aha profaịlụ gị, ma chọọ Main.db faịlụ n'ebe ahụ. Ọ bụ na faịlụ a na ederede gị na ndị ọrụ, kọntaktị, na ọtụtụ ihe echekwara dị ka data SQLite.
N'ụzọ dị mwute, mmemme nkịtị anaghị agụ faịlụ a, n'ihi ya, ị ga-ege ntị na ndị ọrụ pụrụ iche na-arụ ọrụ na data SQLite. Otu n'ime ọrụ ndị kachasị mfe maka ndị na-adịghị akwado ya bụ oghere nchọgharị Firefox, Njikwa SQLite. Ọ na-arụ ọrụ site na usoro nhazi, dị ka ntinye ọzọ na nchọgharị a.
Mgbe ị wụnye ndọtị ahụ, gaa na "Ngwaọrụ" ngalaba ihe nchọgharị, wee pịa "SQLite Manager" ihe.
Na windo mmeba nke meghere, gaa na ihe nchịkọta "Data" na "Jikọọ data".
Na windo na-eme nchọpụta na-emepe, jide n'aka na ịhọrọ nhọrọ "Nhọrọ niile".
Chọta faịlụ main.db, banyere ụzọ a kpọtụrụ aha n'elu, họrọ ya, ma pịa bọtịnụ "Mepee".
Ọzọ, gaa na taabụ "Ndenye ajụjụ".
Na windo maka ịbanye arịrịọ, detuo iwu ndị a:
họrọ mkparịta ụka.id dị ka "ID nke akwụkwọ ozi";
mkparịta ụka.displayname dị ka "Ndị so";
ozi.from_dispname dị ka "onye edemede";
strftime ('% d.% m.% Y% H:% M:% S, messages.timestamp,' unixepoch ',' oge '' dị ka Oge;
ozi.body_xml dika "ederede";
site na mkparịta ụka;
ozi abanye n'ime conversations.id = messages.convo_id;
nyere site na message.timestamp.
Pịa ihe dị n'ụdị bọtịnụ "Gbaa ọsọ". Mgbe nke ahụ gasịrị, a na-ahapụta ndepụta gbasara ozi ndị ọrụ. Ma, ozi ndị ahụ, dị mwute ikwu, enweghị ike ịchekwa dị ka faịlụ. Ihe omume ịme nke a ka anyị ga-ahụ n'ihu.
Na-elele ehichapụ ozi na SkypeLogView
Ọ ga-enyere aka ile ọdịnaya nke ehichapụ ozi ngwa ngwa SkypeLogView. Ọrụ ya dabeere na nyochaa ọdịnaya nke profaịlụ profaịlụ gị na Skype.
Ya mere, na-agba ọsọ SkypeLogView utility. Na-aga nke ọma site na ihe menu "Njikwa" na "Họrọ nchekwa na magazin."
Na ụdị nke meghere, tinye adreesị nke ndekọ profaịlụ gị. Pịa bọtịnụ "OK".
Ihe ndebanye ozi ga-emepe. Pịa na ihe anyị chọrọ iweghachite, wee họrọ nhọrọ "Zọpụta ihe a họọrọ".
A windo meghere, ebe ị chọrọ igosi ebe ị ga-ezipụ ozi ozi na ntinye ederede, nakwa ihe a ga-akpọ ya. Kpebie ebe ahụ, wee pịa bọtịnụ "OK".
Dịka ị pụrụ ịhụ, ọ dịghị ụzọ dị mfe iji weghachite ozi na Skype. Ha niile dị nnọọ mgbagwoju anya maka onye ọrụ na-adịghị njikere. Ọ dị mfe karịa nyochaa kpọmkwem ihe ị na-ehichapụ, na, n'ozuzu, ihe omume ị na-eme na Skype karịa iji awa eweghachi ozi. Ọzọkwa, nkwa na enwere ike iweghachite otu ozi, ị ka ga-enwe.